Kaho Naa… Pyaar Hai (2000) – MM Subtitles
Believe In LoveJan. 14, 2000India172 Min.TV-14
ဒီကား လေး က ထွက်တာ ကြာပါပြီ ဒါပေမဲ့ ခုထိ india ဇာတ်ကားတွေထဲ classic လို့ ပြောခံရတုန်းပါပဲ မင်းသား hrithik roshan ကို ထိပ်တန်းမင်းသား အဖြစ် ရောက်သွားစေတဲ့ သူ့ရဲ ပွဲဦးထွက်ကားတွေထဲမှာ ဒီကားလဲ ပါပါ တယ်
IMDb မှာ 6.9/10 ရ ထားပြီး 80% Rotten Tomatoes ရထားပါ တယ်
ရိုဟစ် လို့ ခေါ်တဲ့ ရိုးရိုးသားသား အေးဆေး နေတတ်တဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက် ဟာ သူ့ဘဝမှာ အချိန်ပို ဆိုတာ ရှာရခက်ပါ တယ် မိဘတွေ မရှိတော့ အတွက် ဦးလေးနဲ့ အဒေါ်နဲ့ အတူနေပြီး ကျောင်းနေနေတဲ့ ညီလေး ကို လဲ သူပဲ မိဘနေရာ က ပျိုးထောင်နေရပါတယ် ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေရပေမဲ့ သူ ဝါသနာပါတဲ့ သီချင်း ဆိုတဲ့ အိပ်မက်ကို တစ်နေ့တော့ လိုချင်တဲ့သူပါ
ဆိုနီယာဆိုတဲ့ ချမ်းသာပြီး ဘာအပူအပင်မှ မရှိတဲ့ မိန်းကလေး နဲ့ အမှတ်မထင်တွေ့ပြီး ချစ်ကြိုက်ကြရာ က သူ့မှာ စိတ်ပူစရာ တစ်ခု တိုးလာပါတော့တယ်. ထုံးစံ အတိုင်း သူဌေးသမီးနဲ့ ဆင်းရဲသား ပြဿနာ မိဘ သဘောတူ တာ ပေါ့ ဒါပေမဲ့ သူရဲ့ အဆိုတော် အိပ်မက် ကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ဆိုနီယာ နဲ့ လိုက်တွဲနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်
သူ့အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည် ဖြစ်လာ ချိန်မှာတော့ အမှတ်မထင် ကြီးမား တဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်လာ ပါတော့တယ်
ပုံမှန် ဆင်းရဲသားနဲ့ သူဌေးသမီး ဇာတ်လမ်း မဟုတ်လို့ စိတ်ဝင်စားရာ ကောင်းပါတယ် မထင်ထားတဲ့ plot twistတွေနဲ့ ဇာတ်အိမ် ကောင်း ကောင်း မလို့ လဲ နာမည်ကျော် ဇာတ်ကား တစ်ကား ဖြစ်ပြီး သိပ်ကို အောင်မြင်ခဲ့တာ ပါ ကြည့်ကြည့်ဖို့ ညွှန်လိုက် ပါ တယ် နော်
Duration……..: 2h 52min
IMDb Rating 6.9 13,717 votes
Download 🔥 1080p 5.1CH ⚡Fast Drive 3.47 GB
Download 720p ⚡Fast Drive 1.33 GB
Download 480p ⚡Fast Drive 764 MB
Download 🔥 1080p 5.1CH G Drive 3.47 GB
Download 720p G Drive 1.33 GB
Download 480p G Drive 764 MB
Download 🔥 1080p 5.1CH Solid Drive 3.47 GB
Download 720p Solid Drive 1.33 GB
Download 480p Solid Drive 764 MB
Download 🔥 1080p 5.1CH Yandex 3.47 GB
Download 720p Yandex 1.33 GB
Download 480p Yandex 764 MB
Watch online 🔥 1080p 5.1CH Yandex 3.47 GB
Watch online 720p Yandex 1.33 GB
Watch online 480p Yandex 764 MB